Ny fiheverana mahazatra matetika amin'ny tontolon'ny steroids anabolic | AASraw
/Blog/Gallery/Ny fiheverana mahazatra matetika eo amin'ny tontolon'ny steroids anabolic
Posted on 10 / 12 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Ity dia ho fomba fijery ankapobeny amin'ny ankapobeny ho an'ny tanjon'ny fahalalana ankapobeny, fa tsy torolàlana ho an'ny torolàlana. Tsy midika izany fa tsy ekeko ny fampiasana azy ary tsy fanekena ny fampiasana azy.
Matetika no diso hevitra na diso diso hevitra- misy karazany hafa steroid. Corticosteroids, izay misy voka-dratsy ratsy kokoa noho Anabolic Steroids, noho ny antony sasany, tsy voataonan'ny fampahalalam-baovao ary ny fampiasana azy dia tena ACCEPTABLE amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra - ao anatin'izany ny fanatanjahantena matihanina sy matihanina. Matetika izy ireo no miady amin'ny fanaintainana. Misy ihany koa ny Progesterone izay ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny endrika mifehy ny fiterahana ary alain'ny vehivavy an-tapitrisany isan'andro. Steroid anabolika (voalaza eto na AS na AS) no inona no eritreretin'ny ankamaroan'ny olona rehefa vao nahare “steroida” sy ny zavatra ratsy rehetra mifandray aminy.
Miaina lafiny samy hafa ny rehetra. Tsy misy olona roa mitovy. Ny milaza fa REHETRA ny olona rehetra dia hiaina zavatra iray mitovy. Ny olona sasany dia sahirana mafy amin'ny fahazoana an'ity raha ny hita ao amin'ny kofehy lambesis. Misy lafiny tokana fa azo antoka ny mpampiasa ny lahy rehetra * ary izany dia atolotray testicular.
A) Atrofy fitsapana- rehefa manampy be dia be ianao testosterone Manomboka hikatona ny HPTA amin'ny vatanao (ajanony ny famokarana Testosterona satria mihatsara kokoa ny vatanao); Raha tsorina dia izany no mahatonga ny kodiaranao hihena. Ny ankamaroan'ny fotoana dia tsy voamarika mihitsy akory. Angamba ny fampihenana 25%, ny 50% indrindra. Vantany vao mandeha ny tsingerin-taona ianao dia tanteraho ny fitsaboana ny PCT (Post-cycle therapy) dia miverina amin'ny habeny tanteraka izy ireo. Tsy maharitra izany. Ny olona sasany dia mihazona HCG (Human chorionic-gonadatropin) raha mandeha amin'ny tsingerin-taona mba hitazomana hatrany ny volony ary manampy koa izy amin'ny fahasitranana satria mitazona ny sela leydig anao.
B) Alahelo / volon-doha: AS tsy miteraka ny aretin-doha na ny fihenan'ny volo. Na izany aza, afaka manafaingana ny dingana izany. Raha mihazakazaka eo amin'ny ankohonanao ny volon-doha, dia mahagaga anao fa mety ho kandida ianao hanafainganana ity dingana ity. I Bill Roberts dia nanoratra momba ny karazana Steroids roa-Type I sy Type II; Type I was compound lehibe toy ny Testosteron, Tren, Decca, Sust, sns ary ny karazana II mitovy Winstrol (stanazolol), dbol, anavar, Masteron sns Ny ankamaroan'ny olona dia manome tsiny ny zava-mahadomelina toa an'i Winstrol ary Masteron Enanthate (Drostanolone) amin'ny maha-meloka ny volon'ny volo ary miezaha hisoroka ireo zava-mahadomelina ireo raha miahiahy momba ny MPB, rehefa tsy izany mihitsy no karazan-java-misy, dia manana fiantraikany lavitra kokoa amin'ny MPB aho. Ary mazava ho azy fa ny fanafody miorina amin'ny DHT (toa ny deca) dia hihamafana ny hodinao. Ny fomba tokana hiadiana amin'izany dia ny fandraisana Finasteride (propecia / proscar) ny karazana shampoos topical rogaine sy ny zavatra hafa.
C) Misy mony mipoaka ny tavany; misy olona mivezivezy ao an-tratrany na any aoriana… ary mihosotra ny hoditry ny olona sasany. Ary indray, voakasik'izany ny tsirairay.
D) Mahatsapa ho toy izany aho dia tokony ho voarakotry ny habaka testicular ary tena hadinoko fotsiny. Imbetsaka aho no maheno olona miresaka momba ny AS mampilentika ny dickinao, raha ny tena marina kosa no milaza ny bolinao. Noho izany, raha te hanazava, dia tsy mihena ny diabinao ary manjary misy dikany ny filazanao fa manala ny orona ny orona. Raha misy, misy rà mandriaka ao amin'io faritra io dia lazaiko fa aleonao ho mora tohina kokoa amin'ny tranga mifanohitra. Indray izany dia miankina amin'ny sifitra izay entinao - ny fanafody sasany toa an'i Deca sy Tren dia mety hasiaka be amin'ny libido anao (avy eo ilay fehezan-teny hoe "deca-dick") ary nisy ny lehilahy nifidy naka Tadalafil (Cialis) (171596-29-5) na viagra (tsy mila ianao) fa ny fanafody hafa toy ny mahitsy ny fitsapana (karazana na hafa) na dbol dia hanana anao hihanika ny rindrina ary malemy tahaka ny… .. Ny ankamaroan'ny tovovavy manambady. sipa mihetsika am-pitondrana toa mankafy ny lehilahy ataon'izy ireo amin'ny fiodinana, lol.
E) "Fanafosafo" - Tsy misy izany. Tsotra tahaka izany. Raha olona tsy mahatoky ianao, eny, hataon'izy ireo ho tsy miorina mafy izy ireo. Fa avy eo, ny zavatra maro sy ny fanafody mety mbola hiteraka ihany koa. Raha tsy mahatanty ara-tsaina ianao na efa voan'ny aretin-tsaina, dia tsy tokony hieritreritra steroid intsony ianao. Maniry aho fa toy izany koa no nolazaina fa toaka. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy iharan'izany. Mahatsapa hoatran'ny milamina kokoa ny ankamaroan'ny olona na tsy mitovy mihitsy. Azoko jerena ny olona mety miramirana kokoa satria somary lehibe sy kely kokoa izy ireo, fa ankoatra izany, ny zavatra mitatitra hoe "roid-rage" (andrim-panjakana na tsia) dia fanamorana.
F) Fahafatesana / tsy fahombiazan'ny taova / sns.
Ny steroid dia tsy mahatonga ny olona ho faty na hitarika ny fahafatesany noho ny fihetsika ratsy. Tsy mbola nisy ny fanadihadiana siantifika naneho rohy mivantana amin'ny steroid anabolika sy fahafatesana. Hanondro an'i Zyzz ny olona, ​​saingy tsy hanondro ny tantaran'ny fianakaviany momba ny aretim-po / ny toe-piainany izy ary tsy mino aho fa nisy autopsy natao ampahibemaso? Raha hanonona ny antontan'isa CDC amin'ny 2005 avy amin'ny Bigger mafy kokoa haingana kokoa:
75,000 Ny olona iray isan-taona dia matin'ny alikaola
Ny olona 435,000 herintaona dia maty amin'ny paraky
ary ny fahafatesan'ny steroid anabolika ……: 3
Ny loza ateraky ny steroids dia be loatra. Tena mampitaha ny toe-javatra misy an'i Pitbulls. Betsaka ny olona isan-taona no maty noho ny voan'ny coconuts na latsaka an-tongotra fotsiny.
Eny, raha toa ka anaovana fanafody fitiliana ny aretina dia mety hampidi-doza. Ny steroida oral (toa ny dbol, winstrol, anavar, sns) dia hepatoxic ary mety hasiaka be amin'ny ati-ponao raha raisina amin'ny fatra lehibe loatra ary maharitra ela… ary raha misotro toaka mandritra ny fihodinana. Izany no antony anolorana azy hampiasana takelaka ra talohan'ny fotoana sy mandritra ary aorian'ny fihodinana. Ny fandraisana zavatra toy ny tsilo ronono dia manampy hanamaivana ny enta-mavesatra eo amin'ny fonao.
Ny tsindry amin'ny ra dia mety ary hiakatra, miakatra kokoa noho izany raha miankina amin'ny famokarana raisinao (indrindra Môtandrostenolone (Dianabol) ary EQ). Ny fahazoana vary masirasira dia afaka manampy amin'ny fitazonana ny kolesterola sy ny BP. Izy io dia zavatra tokony harahina. Ary izany indrindra no antony tokony hihinananareo fa mihinana CLEAN raha eo amin'ny fihodinana ianao - tsy mihinana pizza, burger ary fries.
Steroids dia mihinana intramuscularly - tsy intravenously. Tsy misy fonosana tarika iray eo amin'ny sandrinao na inona izany. Raha mikisaka amin'ny lalan-drà na niafara ianao dia mety ho faty. Misy tranokala tsindrona manokana - ny fehikibo azo antoka indrindra, ny fehikibo, ny glutes, ary ny tranokala ventro-gluteal. Matetika ny olona dia mihevitra fa ny boriky / glutes no toerana azo antoka indrindra, tsy hanaiky aho satria sarotra ny manatratra ary satria ny nerve sciatic dia mihazakazaka be dia be amin'io faritra io ary raha tratranao io dia tsara vintana amin'ny andro sisa iainanao.
Steroids dia ary tsy fanafody fahagagana. Azonao atao ny mipetraka eo ambony seza sy mihinana ambo-ovy ary mety mitombo be izany, fa raha izany no hataonao rehefa maka azy ireo dia tsy tokony handrebireby ny volanao akory ianao. Mbola mila manao ny asa ianao. Mbola mila mihinana madio- hoy aho fa na dia ny madio kokoa aza. Mbola mila miambina ny zavatra rehetra.
Pro-hormonina dia tsy azo antoka-vahaolana hafa amin'ny steroids intsony satria afaka mividy azy ireo amin'ny GNC / Nutrénara Fomba feno / Na aiza na aiza. Mampidi-doza izy ireo ary matetika, dia tsy afaka mividy fanafody PCT tena izy any ianao ary avy eo mankamin'ny lalana tena saro-bidy mankany amin'ny fanarenana-. Betsaka ny zaza nifarana tamin'ny TRT nandritra ny androm-piainany noho izany. Tsy azoko ny hoe mbola tsy nisy ny fitoriana taorian'ny fivarotana an'ireo fivarotana ireo.
Ny MK-677 (Ibutamoren) mandeha tsara amin'ny hozatra ho an'ny hozatra? Review Sarm [2019 NEW]	Torolàlana feno hividianana 2019 Ho an'ny fananganana bodybuilding SARM SR9009